ဟန်းဂုရွာ: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဆိုးလ်မြို့တော်ဝန် တွေ့ဆုံခဲ့ကြ
“ပြည်သူတိုင်းဟာ အခွင့်အရေးကို လိုချင်မှုနှင့်အတူ တာဝန်ကိုလည်းယူတတ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့ လမ်းဝမှာ ရောက်နေတဲ့ ကျမတို့တွေဟာ မိမိလိုချင်တဲ့ အခွင့်အရေးကိုသာမက
တာဝန်ကိုလည်း ပူးတွဲယူတတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အသိတရားကို ပြည်သူတွေထံ ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။”
လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေမှ ဆိုးလ်မြို့တော်ဝန်ဖြစ်လာသူ မစ္စတာဘာ့ဂ်ဝန်ဆူးန်အား နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေး
ဆုရှင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ နှစ်ဦး တွေ့ဆုံစဉ်ပြောကြားခဲ့တဲ့ စကားပဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဂျန်န၀ါရီလ၂၉ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဆိုးလ်မြို့တော်ခန်းမ ၆ထပ်မြောက်ရှိ
မြို့တော်ဝန်ရုံးခန်းကို သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာမြို့တော်ခန်းမရှိ ဧည့်သည်တော် မှတ်တမ်း စာအုပ်တွင် "My first visit to Korea. I hope the beginning of greater friendship between our nations. Aung San Suu Kyi, 29. Jan. '13 ဟုရေးသားပေးခဲ့ပါတယ်။
သူတို့၂ဦး မိနစ်၅၀ကြာ တွေ့ဆုံစကားပြောဆိုခဲ့ကြရာတွင် အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန် ညီမျှစွာ ယူတတ်ဖို့ အကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်း၊ ၂နိုင်ငံမြို့တော် အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ်များအကြောင်းတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်ုးစုကြည်ကမြို့တော်ဝန်ဘာ့ဂ်အား ”ကျမက ဒီမိုကရေစီရဲ့ သင်္ကေတလို့ခေါ်ဆိုခံရခြင်းထက် ဒီမိုကရေစီအတွက် အလုပ်ကြိုးပမ်းလုပ်သူရဲ့ဘ၀ကို ပိုလိုလားပါတယ်၊ သာယာတဲ့ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း ကို တည်ထောင်ဖို့ လူတိုင်းဟာ အခွင့်အရေးနဲ့ တာဝန် ၂ဘက်ကို မျှတစွာ ယူတတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်” လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြို့တော်ဝန်ဘာ့ဂ်ကလည်း မိမိနဲ့ဒေါ်စုဟာ လူ့အခွင့်အရေးရဲ့တန်ဘိုးကို အလေးထားတဲ့ဘက်မှာ များစွာ တူညီကြောင်း၊ ဒေါ်စုရဲ့ တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံ အားပေးသွား မှာဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်စုက ကျမတို့ဟာ အနှစ်၂၀ကျော် ဒီမိုကရေစီအတွက်ကြိုးပမ်းလာခဲ့ပေမယ့် အခုအထိတိုင် ပန်းတိုင်ဆီ သို့လျှောက်လှမ်းနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့ရဲ့ ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုးကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀န်းရဲ့ အားပေးမှုတို့ကြောင့် လုံးဝဒီမိုကရေစီရရှိရမယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြောင်း ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး မြို့တော်ဝန်ဘာ့ဂ်က ဆိုးလ်-ရန်ကုန်မြို့တော် ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ဆိုးလ်မြို့တော်ရဲ့ ပြည်သူပါဝင်စီမံ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
မြို့တော်ဝန်က ဆိုးလ်မြို့တော်ဟာ ဆန်းသစ်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ စီမံကိန်းဌာနအောက်တွင် လူ့အခွင့် အရေး အတိုင်ပင်ခံဌာနကို တည်ထောင်ကာ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် လူ့အခွင့် အရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း စသည့် ပြည်သူ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာများအတွက် အားထုတ်နေကြောင်း၊ ယခုနှစ် နှစ်စမှ စပြီး အရပ်သားပညာရှင်၃ဦးဖြင့် ပြည်သူ့လူ့အခွင့်အရေး အကာအကွယ်ပေးရေးဌာနကို ဖွဲ့စည်းကာ ပထမဦးဆုံး ဒေသတွင်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အဖြစ် လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိကြောင်း စသည့် ဆိုးလ်မြို့
တော်ရဲ့ ပြည်သူ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် ဆိုးလ်မြို့နှင့် ရန်ကုန်မြို့ ၂ဘက် အပြန်အလှန် ကူညီရေး အစီအစဉ်များကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့
ကြပြန်ပါတယ်။ မြို့တော်ဝန်ဘာ့ဂ်က လွန်ခဲ့တဲ့လများက သူဟာ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်နှင့်တွေ့ဆုံကာ ဆိုးလ်-ရန်ကုန်ဆိုင်ရာ အခြေခံမြို့ပြအင်္ဂါရပ်များ တည်ဆောက်ရေး အစီအစဉ်များနှင့် ရေပိုက်လိုင်းများ၊
မြေအောက်ရထားလမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း စတဲ့မြို့တော်တွင်း လိုအပ်သည့် အင်္ဂါရပ်များဖြည့်ဆည်းခြင်း ဆိုင်ရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးကြောင်းနှင့် ဆိုးလ်မြို့မှ ရန်ကုန်မြို့အား အကူအညီပေးရန် အသင့်ရှိကြောင်း၊ သို့သော် ဆိုးလ်မြို့တော်အနေဖြင့်လည်း အခြားနိုင်ငံများရဲ့မြို့တော်များကို စံနမူနာယူနေရဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သော လများက မိမိဟာ ဥရောပမြို့တော်များကိုလည်ပတ်ကာ ပိုမိုခိုင်မာတဲ့ နှစ်ဘက်ပူးပေါင်း ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်နည်း၊ တိုးမြင့်နည်းများအား ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးကြောင်း ၊ အဲဒီ အတွေ့အကြုံနှင့် အဆက်အသွယ်များကို ရန်ကုန်မြို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြု ကူညီပေးလိုကြောင်း
သူတို့၂ဦးဟာ ဆွေးနွေးမှုများအပြီး ဆိုးလ်မြို့တော်ခန်းမတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။
မြို့တော်ခန်းမတွင်းရှိ ဒီဂျစ်တယ်စခရင်နှင့် Fair Tradeကုန်သွယ်ရေးဆိုင်များကို လှည့်လည် ကြည့်ရှုကြ
ရင်း မြို့တော်ဝန်ဘာ့ဂ်က မြန်မာပြည်မှာလည်း Fair Tradeကုန်သွယ်ရေးဆိုင်များ ရှိပါသလားဟု မေးခဲ့ သည်။ ဒေါ်စုက လက်ရှိ မရှိသေးကြောင်းနှင့် မြန်မာပြည်ထွက် ထန်းလျှက်က အရသာရှိပြီး ကျော်ကြား
Fair Trade ကုန်သွယ်မှု ဟူသည်
Fair Trade ကုန်သွယ်မှု ဟူသည် နိုင်ငံများအကြား ညီမျှသော ကုန်သွယ်မှုကိုခေါ်သည်။
Fair Trade ကုန်သွယ်မှုသည် ယနေ့ခေတ်တွင် အမျိုးမျိုးသော ကုန်ပစ္စည်းများကို မျှတသော ဈေးနှုန်းဖြင့် သတ်မှတ်ရောင်းဝယ်စေရန်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူထုလှုပ်ရှားမှု အသွင်တရပ် အဖြစ် ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိသည်။
Fair Tradeကုန်သွယ်မှုသည် လူ့ကျင့်ဝတ်ကို အခြေခံသည့် ကုန်သွယ်မှုပင်ဖြစ်ပြီး မဖွံ့ဖြိုးသေးသော
နိုင်ငံများ၏ လယ်ယာထွက်ပစ္စည်းများအား ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများသို့ တင်ပို့သည့် ကုန်သွယ်မှုပင်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံအချင်းချင်း ကုန်သွယ်မှုသည် ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲမှုနှုန်းကို ကျဆင်းသွားစေရန် အကန့်အသတ်ရှိနေသည် ဟူသော အယူအဆ မှတဆင့် Fair Trade ကုန်သွယ်မှုသည် ၁၉၉၀ခုနှစ်တွင် စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
Fair Trade ကုန်သွယ်မှု၏ အယူအဆတွင်
ကုန်ထုတ်သူရဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှု စသည့် သတ်မှတ်မှုများ ပါဝင်သည်။
ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများ၏ ကုန်ထုတ်သူမှ ထုတ်လုပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းကာကွယ်မှု အလေးပေး ကုန်ပစ္စည်းများကို မျှတသော ဈေးနှုန်းဖြင့် တိုက်ရိုက် ၀ယ်ယူအားပေးခြင်းဖြင့်	အဆိုပါနိုင်ငံများအနေဖြင့် ဆင်းရဲတွင်းမှ လွတ်မြောက်နိုင်စေရန် ဟူသည် Fair Trade၏ အဓိက ရည်မှန်းချက် ဖြစ်သည်။
Posted by စိုးမိုးသူ at 1:37 PM